လွင်မိုး၊ လူမင်း၊ နေတိုး၊ ပြေတီဦး၊ စိုးမြတ်သူဇာနှင့် အနုပညာရှင်များစွာ ပါဝင်မည့် 'လူကြီးလ? - Yangon Media Group
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက၏ဈေးကွက်ဝင် မင်းသားလေးယောက် ပါဝင်ရိုက်ကူးမည့် ‘လူကြီးလူ ကောင်းများ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ကန်တော့ပွဲပေးအခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်တွင် တော်ဝင်ဂါဒင်းဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ‘လူကြီးလူကောင်းများ’ရုပ် ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာ ပြည်ဟိန်းသီဟမှ ရိုက်ကူးပုံဖော် မည်ဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင် လွင်မိုး၊ လူမင်း၊ နေတိုး၊ ပြေတီဦး၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ ထက်ထက်ထွန်း (Miss Universe Myanmar 2016) ၊ စဝ်ယွန်းဝတီဦး(Miss Myanmar International 2017)၊ ရွှေအိမ်စည်၊ ယွန်းဝတ်လွှာအောင် (Miss Now How 2017 )တို့မှ အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပေးကြမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး နှင့်ပတ်သက်ပြီး အနုပညာရှင်များ၏စကားသံများကို အခုလိုပဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
”ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးဖို့အတွက် ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရိုက်ကူးခွင့်ပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်က ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး တော့ ဒီဇာတ်ကားမှာပါဝင်တဲ့ မင်းသားတွေက နာမည်ကြီးမင်းသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့ကို အချိန်ပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျွန်တော်ကကျေး ဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားက သရုပ်ဆောင်ပိုင်းတွေကို ထူးထူး ခြားခြားဖြစ်စေချင်တယ်။ ဒီလိုမျိုး မင်းသားကြီးလေးယောက်ဆုံပြီး တော့ ရိုက်ကူးဖို့ဆိုတာက လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ”
”ဒီဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးတယ်ဆိုတာက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို လူ တွေ စိတ်ဝင်စားလာအောင် ကျွန် တော်တို့ လေးယောက်ဆုံပြီးတော့ ဒီလိုမျိုးရိုက်ကူးတယ်ဆိုတာက အများပိုင်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ ကြိုးစားနေရတဲ့ အတိုင်းအတာအထဲမှာ အားအရဆုံးဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကို ဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာ ဖိဖိစီးစီးလုပ်လာတဲ့သဘောပါ။ ဒါကလည်း ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ရှယ်ယာဝင်ထားတဲ့ အနုပညာရှင်ပေါင်း ၄ဝဝ ကျော်ရဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက် လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကား ရိုက်ကူးတာက အဓိကရည်ရွယ်ချက်က Marketing သဘောပါပဲ။ ဘာအတွက်လဲဆိုရင် ရုပ်ရှင်အတွက်ပါ”
ထက်ထက်ထွန်း(Miss Universe Myanmar 2016 )
”ဒီဇာတ်ကားကို လက်ခံရိုက်ကူးဖြစ်တာက ထက်ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ ဦးချိုကြီးကနေပြီးတော့ တစ်ဆင့်ကမ်းလှမ်းလာတယ်။ အများပိုင်ထုတ်လုပ်ရေးကနေပြီးတော့ ဇာတ်ကားတစ်ကားရိုက်ကူးဖို့ရှိတယ်။အဲဒီမှာ Miss တွေကိုရွေးချယ်မယ် ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ထက်ကို စဉ်းစားမိတယ်လို့ ဆရာကပြောတယ်။ အဲဒီမှာ ထက်လည်း စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်သွားပြီးတော့ လူရွေးချယ်ခံခဲ့တယ်။ အဲဒီကနေပြီးတော့ ဒီလိုမျိုး ဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်”
ဂျပန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ၂ဝ၁၈ ကို ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး မြို့ ကြီးများတွင် ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက် စတင်ကျ?
မင်းသား ဂုံယူနှင့် မင်းသမီး ဂျောင်ယူမီတို့၏ အချစ်ရေး ကောလာဟလ သတင်းကို အေဂျင်စီ ငြင်းဆို
မန္တလေးမြို့တော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် နှောင်ကြိုးမဲ့ အလှူရှင်များထံမှ လှူဒါန်းသည့် ပစ
ကက်ရ်ှမီးယားတွင် စစ်သွေြးွကများနှင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲကြောင့် အိန္ဒိယစစ်သားလေးဦးန??